That's so good, right?: သတိရဖို့အမှတ်တရလေးတွေ
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မိုးစက်ကျသံတစ်ဖျောက်ဖျောက်ပြူတင်းတံခါးထဖွင့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဘာကြောင့်အိပ်မရတာလဲ? အခုလိုညမျိုးမှာကျွန်တော်တစ်ယောက်ယောက်ကိုများလိုအပ်နေခဲ့ပါသလား? ဟင့်အင်း မဖြစ်နိုင်ပါ?
မျက်နှာ ရင်ဘတ်ပြီးတော့နှလုံးသားဆီသို့ မိုးတွေေ၀၀ါးနေသော်လည်းလမ်းမတစ်လျှောက်လုံးကိုကောင်းမွန်ပြတ်သားစွာ
မြင်နေရသည်။ အနက်ရောင်လမ်းတစ်လမ်း လှေကားထစ်များအပေါ်မှာကုန်းမြင့်တစ်ခုကော်ဖီဆိုင် ဖက်ရှင်ဆိုင် snack bar, အခွေငှားဆိုင်များ beer ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဆိုင်တစ်ခုခုကထွန်းထားဟန်တူသောမီးပြာပြာသည် လမ်းမပေါ်တွင်အရိပ် ထင်နေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ပျံ့လွင့်လာသော သီချင်းသံသဲ့သဲ့ကိုလည်းကြားနေရသည်။
လူသူကင်းမဲ့နေသောလမ်းပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကိုလက်ပြနေသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရသလိုဖြစ်သွားသည်။မျက် လုံးများကိုပွတ်သပ်ပြီးသေသေချာချာပြန်ကြည့်မှထင်မိထင်ရာ ထင်လိုက်မိမှန်းသေချာသွားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဝေးကွာခြင်းလမ်းမှာကျွန်တော်ဆောက်တည်ရာမဲ့နေဆဲပဲအခုလိုမိုးသည်းညတွေမှာလေသံလေးနဲ့အနားနားကပ်ပြီးမေးလာမယ့် ချစ်လားဆိုတဲ့စကားသံလေးကိုမျှော်လင့်မိနေတုန်းပဲ ကျွန်တော်လက်ဖ၀ါးတွေပေါ်ကအုပ်ပြီး ဆုပ်ကိုင်ထားတတ်တဲ့လက်တစ်စုံရဲ့နွေးထွေးမှုကိုမိုက်မိုက်မဲမဲတမ်းတမိနေဆဲပဲ။
ခင်ဗျားနှင့်သိကျွမ်းရသောအဖြစ်ကိုကံကောင်းသည်ဟုလက်ခံထားမိခြင်းသည်ကျွန်တော်၏မှားယွင်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါလိမ့် မည်။ကျွန်တော်ကတစ်ဆိတ်စိတ်ကူးယဉ်တတ်လွန်းသည်မဟုတ်လား။ထိုအိမ်တွင်နေရသောအခန်းသည်ဧည့်ခန်းနှင့်ကပ် ရပ်ဖြစ်ကာအပြင်ထွက်ရပ်စရာဝရန်တာသည်လည်းအခန်းနှင့်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သည်။၀ရန်တာသည်အပြင်သို့သတ်သတ်ထုတ်ထားသောအမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့်အပြင်ထွက်ရပ်လျှင်ဘေးခန်းနှစ်ခန်းရှိဝရန်တာနှစ်ခုကိုလည်းလွတ်လပ်စွာမြင်နေရပါသည်။
အဲ့ဒီနေ့ကဖွင့်ခဲ့သည့်သီချင်းနာမည်ကိုတော့ေ၀၀ါးလျက်ရှိပြီ။ထိုစဉ်ကအလွန်ခေတ်စားခဲ့သောဟစ်ဟော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ အလွမ်းနေ့ရက်ဟူသောသီချင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။(ကျွန်တော်ထိုသီချင်းကိုအလွန်အမင်းနှစ်သက်ခဲ့ဖူးသည်) ကျွန်တော့် တို့အခန်းကသုံးထပ်တွင်ဖြစ်သောကြောင့်လမ်းပေါ်ရှိမြင်ကွင်းများကိုငေးကြည့်နေရင်းကကျွန်တော့်မျက်လုံးညာဘက် ထောင့်ထဲသို့အနီရောင်အရိပ်တစ်ခုဝင်လာခဲ့သည်။
ဘာကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာထိုစဉ်ကကျွန်တော်မသိနိုင်ခဲ့ပါ။အခန်းထဲပြန်ရောက်ပြီးခုတင်ပေါ်ပစ်လှဲချလိုက်ချိန် တွင်ကျွန်တော့်သွေးထဲတွင်လည်ပတ်နေသောရှက်စိတ်မဟုတ်သည့်တစ်ခြားခံစားချက်တစ်မျိုးကိုသတိထားမိလိုက်ချိန်တွင်ကျွန်တော်အလွန်တရာထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါသည်။ဘုရားဘုရား ဘာဖြစ်ရပါလိမ့် ယောကျာ်းချင်းကို..။ နောက်မှ တစ်စုံတစ်ခု ကိုတွေးမိသွားကာစိတ်သက်သာရာရလာသည်။ကျွန်တော်ထံတွင်မရှိသည့်သူရဲ့ပြေပြစ်သည့်ခန္ခာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံကိုသဘောကျမိခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
တစ်ယောက်တည်းဘ၀တွင်ကျွန်တော်ခုချိန်တိုင်နေသားမကျနိုင်ခဲ့ပါ။ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းခင်ဗျားနှင့်နေခဲ့ရသောအချိန်သည်လည်း ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ဆယ်ခုနှစ်ပုံကိုမှနှစ်ပုံသောကာလတိုလေးပဲမဟုတ်လား မည်သို့ပင်ဖြစ်စေခင်ဗျားနှင့် နေခဲ့ ရသောကာလတိုလေးသည်ပင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သည့်ကျွန်တော့်ဘ၀၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။
အထူးသဖြင့်အခုလိုမိုးသည်းသည်းရွာနေချိန်များသည်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပိုမိုသတိရစေရန်တွန်းအားပေးချိန်များဖြစ်၏။ ကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားတတ်သောခင်ဗျားခန္ခာကိုယ်အနွေးဓာတ်ကိုရူးရူးမိုက်မိုက်တမ်းတမိတတ်ဆဲဖြစ် သည်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်လိုအပ်ကြပါလျက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘာကြောင့်များဝေးကွာခဲ့ရတာပါလဲ။အကြောင်းရင်းများစွာထဲတွင်ကျွန်တော်၏တွေဝေတတ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်လွန်းမှုတွေထိပ်ဆုံးကပါဝင်နေပါလိမ့် မည်။
ခုချိန်တွင်တော့သူပြောခဲ့ဖူးသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဝိုင်းဝေဖန်ကြဖို့အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြဖို့သာစိတ်ကူးရှိကာခံစားစရာရှိရင်တော့ကိုယ်ဟာကိုယ်ခံစားရမှာဟူသောစကားကိုအတော်ကြီးနားလည်လျက်ရှိပြီ..တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရသောပြသနာကိုနားလည်ပေးနိုင်မည့်သူရှားလှပါသည်။ခင်ဗျားကျွန်တော့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့သည်ဆိုတာကိုကျွန်တော့်၏ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပြောပြသလောက်နားမလည်ခဲ့သော်လည်းခင်ဗျားမျက်လုံးအကြည့်တွေထဲမှာ ခင်ဗျားအပြု အမူတွေထဲမှာကျွန်တော်ခံစားနားလည်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဒါပေမယ့်လည်းအချစ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘ၀တစ် လျှောက်လုံးပြီးပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာပဲ။
ကျောင်းမှာလဲယောကျာ်းလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်ပွန်းတတီးနေတာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပဲသူ့နဲ့ကျမှဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့ရသလဲ မဝေခွဲနိုင်ပါ။ဆယ်ကျော်သက်မှာဖြစ်နေကျအတိုင်းကိုယ်ထက်အသက်ကြီးသောအစ်မကြီးတွေကိုမြင် လျင်ရင်ခုန် သလိုခံစားချက်သည်လည်းရှိမြဲ။
ရေရေရာရာအကြောင်းလည်းမရှိပဲဘာမှန်းမသိသည့်ခံစားချက်များဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်တွေဂယောင်ချောက်ချားဖြစ်နေခဲ့ သည်။ကျောင်းသို့ရောက်လျင်သူငယ်ချင်းများကလှော်ပေးနေကာကျွန်တော်လည်းသဘောကျသည့်ကောင်မလေးတစ် ယောက်နှင့်နီးစပ်ရန်ကြိုးစားနေပြီးအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါအိမ်နီးချင်းမျိုးတူယောကျာ်းတစ်ယောက်အတွက်တစ်မျိုးတစ်မည်ခံစားရခြင်းသည်တကယ်တော့ဂွတီးဂွကျနိုင်လှပါသည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါရစေလို့ပြောခဲ့သလား ဒါမှမဟုတ်အိမ်လာလည်ပါရစေလို့ခွင့်တောင်း ခဲ့တာလားမရေရာတော့။ စကားဝိုင်း တစ်ခုလုံးကိုတော့သူကပဲဦးဆောင်သွားခဲ့တာသေချာပါသည်။သူအဒေါ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိသော ကြောင့်ဒီမှာနေတာများကြောင်းတစ်ယောက်တည်းနေရမှာအဆင်မပြေသဖြင့်သူ့ကိုခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထို အဒေါ် ကမကြာခဏခရီးသွားတတ်သဖြင့်သူတစ်ယောက်တည်းပျင်းပျင်းနေရကြောင်းစသည်တို့ပါဝင်တာကိုတော့ရယ်ချင်စိတ်တစ်ဝက်နှင့်မှတ်မိနေပါသေးသည်။
(ခင်ဗျားကသိပ်စကားများတာပဲ) ဟုကျွန်တော်တွေးနေစဉ်မှာပင်သူကလည်းမင်းက တော်တော်စကားနည်းတာပဲဟုပြော သွားခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ထင်ထင်ရှိနေခဲ့ပါသည်။
ထိုနေ့ညနေကအဖွားဆီမှာခွင့်တောင်းလျက်ကျွန်တော်ကိုကန်ဘောင်ဆီသို့လမ်းလျှောက်ရန်လာခေါ်ခဲ့သည်။သူဘာကိုရည်ရွယ်ခဲ့သလဲဆိုတာဘာကိုမှကျွန်တော်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါ။(နားလည်ခဲ့သောအချိန်သည်အရမ်းကိုနောက်ကျသွားပြီးသောအချိန်တွင်ဖြစ်ပါသည်) ကန်ဘောင်ပေါ်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ချိန်သည်မိုးရွာပြီးကာစဖြစ်သောကြောင့်ပတ်ဝန်း ကျင် တစ်ခုလုံးလင်းဝင်းစိမ်းစိုနေခဲ့ပါသည်။
သူကပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လျှောက်သော်လည်းကျွန်တော်ကသူ့ဘေးတွင်ကပ်လျှောက်ရမှာဝန်လေးသလိုဖြစ်လျက်တမင်ပင်လမ်းပေါ်မှဆင်းလျှောက်လာခဲ့သည်။တကယ်တော့ထိုသို့ဝေးကွာအောင်နေခဲ့ခြင်းကပင်စောစီးစွာအသားချင်းထိရဖို့အ ကြောင်းဖန်တီးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။လမ်းကွေ့တစ်ခုတွင်ဟွန်းမတီးပဲအရှိန်ပြင်းစွာချိုးကွေ့လာသောကားတစ်စင်းကိုသူမြင် သောအခါကျွန်တော်လက်များကိုဆွဲယူလျက်ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆွဲခေါ်ခဲ့သည်။တကယ်တမ်းကတော့ကားဖြတ်သွားရာ နေရာသည်ကျွန်တော်ရှိနေခဲ့သောနေရာနှင့်တော်တော်လှမ်းပါသည်။ထိုကားခပ်ဝေးဝေးသို့ရောက် သွားသည့်တိုင် ကျွန်တော် လက်ကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ မိုးရွာထားသောအပြင်ရာသီဥတုအရှိန်ဖြင့်ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးများ အေးစက်နေခဲ့သည်ကိုသတိထားမိသွားခဲ့ဟန်ဖြင့်ချမ်းနေသလားဟုမေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုသာခါယမ်းပြခဲ့သည်။တကယ်တမ်းလည်းကျွန်တော်ချမ်းမနေခဲ့ပါ။
ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောခံစားချက်ကတော့အိပ်ယာပေါ်မှာပစ်လှဲပြီးမျက်လုံးများကိုစုံမှိတ်ထားချင်နေတဲ့စိတ်တစ်ခုပါပဲ။တကယ်တမ်းအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတွင်လည်းအိပ်ယာပေါ်သို့လှဲချကာ မျက်လုံးများ စုံမှိတ်လိုက်ချိန်တွင်သူ့မျက်နှာကစိတ်အာရုံထဲတွင်ထူးဆန်းစွာပေါ်လာခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းရက်များတွင်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းကပြန်ရောက်သည့်အချိန်များတွင်ကျွန်တော်တို့အခန်းဘက်သို့သူမကြာခဏရောက်လာတတ်သည်။ကျွန်တော့်အဘွားသည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားကို အလွန်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။သူလာလည်တိုင်းအဘွားနှင့်နှစ်ယောက်စကားလက်ဆုံကျကြလျင်ကျွန်တော်ကတော့အပြင် မထွက်ပဲကိုယ်အခန်းထဲတွင်ကိုယ်တံခါးပိတ်ခါစာကျက်နေခဲ့မိသည်။
ထိုစဉ်မှာပဲသူကကျွန်တော်ပုခုံးများကိုဆွဲလှုပ်ကာ 'ကောင်လေး ထထ' ဟုပြောလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်လဲဆက်လက် ဟန် မဆောင်နိုင်တော့ပဲပက်လက်လှန်လိုက်လျင်သူနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာမျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွားခဲ့တော့ကျွန်တော်လန့်သွားပါသည်။အနီးကပ်မြင်ရသောသူ့မျက်နှာ၏သန့်စင်ချောမွေ့မှုတွင်ကျွန်တော်ရှက်သွားပြီးကိုယ့်ပါးတစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်ကွယ်ထားမိလိုက်သည်။(ထိုစဉ်ကကျွန်တော့်မျက်နှာတွင်ဝက်ခြံတစ်ခုနှစ်ခုထွက်နေသည်)သူကတော့ထိတ်လန့်သွားသောကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုမြင်တော့သဘောကျသလိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရယ်လိုက်သည်။သူ့လောက်ကြည့်ကောင်းသောပြုံးရယ်ဟန်မျိုးကိုကျွန်တော်မတွေ့ဖူးခဲ့ပါ။အရင်ကလည်းယောကျာ်းလေးချင်းဘယ်သူရယ်ရယ် သူ့ကို ကြည့်သလိုငေးစိုက်မကြည့်ခဲ့ဖူး တာလဲပါပါလိမ့်မည်။အညိုရောင်မျက်လုံးများကစေ့ပိတ်သွားလျက်နူတ်ခမ်းထောင့်စွန်းရှိအချိုင့်ကလေးတစ်ဖက်ကရေးရေးပေါ်လွင်သွားလျက်ညင်သာစွာအပြုံးတွင်ကျွန်တော်တဒင်္ဂမင်သက်သွားခဲ့ပါသည်။
သူကျွန်တော်ကိုစပြောလာသော်စကားသည်ဘာလို့ပုန်းနေတာလဲဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ထိုမေးခွန်းကိုမေးစဉ်က ကလေး တစ်ယောက်ကိုကျီစယ်သလိုဖြစ်နေသောသူ့မျက်လုံးများကိုကျွန်တော်သဘောမကျပါ။ထို့ကြောင့် 'မပုန်းပါဘူး' ဟုမျက်နှာတည်တည်ဖြင့်ဖြေခဲ့သည်။သူကတော့ထိုသို့ဖြေသည်ကိုပင်သဘောကျသွားသလိုဟက်ဟက်ပက်ပက်ထပ်ပြုံးပြန်ပါသည်။ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိမွန်းကျပ်သည့်ခံစားမှုရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါသည်။ပြီးတော့သူ့အိမ်သူယာလိုသဘောထားပုံဖြင့်ကျွန်တော့်ဘေးခုတင်နေရာလွတ်ပေါ်သို့လှဲချခဲ့သည်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမနေတတ်တော့ပဲအိမ်ရှေ့ဝရန်တာသိုထွက်ရပ်ခဲ့မိတော့သည်။ကျွန်တော်အပြင်ဝရန်တာတွင်ရပ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကက်ဆက်ခလုတ်ဖွင့်သံကြားပြီးကျွန်တော့်ဘေးတွင်သူလာရပ်ကာပုခုံးတစ်ဖက်ကိုဖွဖွဆုပ်ကိုင်ရင်း ဘာလို့ကိုယ့်ကိုစကားမပြောတာလဲဟု တိုးတိုးကလေးမေးလာသည်။ထိုစဉ်ကကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်ခံစားနေရသောတင်းကျပ်မှုသည်ရင်တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်သွားတော့မည်ဟုထင်ရလောက်အောင်နစ်မွန်းလျက်ရှိသည်။
သူဖွင့်ထားခဲ့သောကက်ဆက်မှသီချင်းသံသည်လွန်ခဲ့သောရက်ဆီကကျွန်တော်ပိတ်ထားခဲ့သောသီချင်းသံသာဖြစ်၏။(ချစ်ခဲ့ကြတဲ့နေ့ရက်တွေလွမ်ခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်ဟာတောင့်တခဲ့တဲ့အကြင်နာများနောက်ထပ်မရနိုင်တော့တို့နှစ်ယောက်တကယ်ကိုဝေးကြပြီကွာ သိပ်ချစ်ရက်နဲ့ခွဲခွာ) သက်ပြင်းကိုဖွဖွရှိုက်ထုတ်မိတော့သူကျွန်တော့်ကိုနားမလည်နိုင်သလိုကြည့်ခဲ့သည်။
မှတ်မှတ်ရရထိုနေ့ကသူပြန်သွားပြီးနှစ်ရက်ခန့်ဝရန်တာသို့ထွက်သည်လဲမမြင်ရ..ကျွန်တော်ဆီလဲရောက်မလာခဲ့ပါ။နှစ်ရက် မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆီသို့သူဖုန်းဆက်လာကာသူ့အခန်းကိုလာခဲ့ဖို့ပြောပါသည်။ကျွန်တော်သွားသင့်မသွားသင့်စဉ်းစားနေပြီးမှသွားချင်စိတ်ကအနိုင်ရသွားကာသူ့အခန်းသို့ကူးသွားမိပါသည်။သူအခန်းသည်အဆင်သင့်တံခါးဖွင့်ထားပြီးအိမ်ရှေ့ခန်းမှာမှောင်မည်းလျက်ရှိသည်။ကျွန်တော်နှင့်ဘေးချင်းကပ်ရပ်တစ်ခန်းသာမီးလင်းနေသောကြောင့်အိမ်ထဲသို့ဆက်မ၀င် သေးပဲလှမ်းအသံပြုလိုက်တော့မှသူက၀င်ခဲ့ဖို့ခေါ်သောအသံထွက်လာသည်။အခန်းထဲရှိခုတင်ပေါ်တွင်ခေါင်းအုံးများကိုဆင့်ကာလှဲနေသောသူ့ကိုတွေ့ရသည်။ 'နေမကောင်းဘူးလား' ဟုကျွန်တော်အမေးကို ခေါင်းငြိမ့်အဖြေပေးခဲ့သောအခါ ကျွန်တော် ရင်ထဲတွင်သူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သနားစိတ်ဝင်လာခဲ့ပါသည်။ တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်သူ့ကိုပြုစုမည့်သူရှိမှာ မဟုတ်။ဆွေမျိုးသားချင်းလဲမရှိသည့်သူစိမ်းများအလည်တွင်သူဘယ်လောက်အားငယ်နေမလဲ။သူကျွန်တော်နှင့်သိကျွမ်း ချင်သည့်ဆန္ဒကိုလည်းနားလည်မိလာပါသည်။
သူကစကားပြောရင်မျက်နှာကိုမြင်နေရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုပြောခဲ့သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနှင့်စကားပြောရတာအဆင် ပြေနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ထိုညကအကြာကြီးဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့သည်။မှတ်မှတ်ရရ Sleepless in Seattle ဇာတ်ကား အကြောင်းစကားရောက်သွားချိန်တွင်သူကစကာ'မနက်ဖြန်ကျောင်းသွားရဦးမှာအိပ်တော့'ဟုဆိုကာဖုန်းချသွားပါသည်။ဖုန်းချကာနီးတွင်သူပြောသွားသောစကားလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာအမှတ်ရဆဲဖြစ်သည်။
တကယ်တမ်းသွားဖွင့်မိတော့လည်းခင်ဗျားမျက်နှာလေးကိုမြင်ယောင်လာကာမျက်လုံးများေ၀၀ါးလာတာကလွဲလို့ဘာမှထူးခြားမလာခဲ့ပါ။တစ်ယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်နေရခြင်းကိုသည်းမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံးတွင်မိုးကာအကျီကိုကောက်စွပ် လျက်အပြင်ထွက်လာခဲ့မိသည်။ခုနကသည်းထန်နေသောမိုးသည်အခုတော့သူမဟုတ်သလိုပင်တစ်ဖွဲဖွဲသာကျတော့၏။ကျွန်တော်သည်ညဥ့်သိပ်မနက်သေးသဖြင့်လူတွေရှိမည်ဆိုတာသေချာသောအင်းစိန်လမ်းမဘက်သို့မလျှောက်ဖြစ်ပဲကန် ဘောင်ရှိရာလမ်းဖြစ်သောပြည်လမ်းဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့မိသည်။ဒီလမ်းသည်ကျွန်တော်တို့မကြာခဏအတူလျှောက်ခဲ့ သောလမ်းဖြစ်ပြီးသူ့အရိပ်အယောင်များလွင့်ပျံ့ကျန်နေဆဲလမ်းတစ်လမ်းလဲဖြစ်ပါသည်။တစ်ခါကသူ့ကျွန်တော်ကိုဆွဲတင်ခဲ့ ဖူးသောပလက်ဖောင်းနေရာလေးကိုလှမ်းမြင်ရသောအခါရင်ထဲကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနာကျင်လာခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်ပိုင်းကာလများတွင်တော့သူနှင့်ဆက်ဆံရသည်မှာအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါသည်။သူ့ကိုမြင်သည့်အခါခင်မင်စိတ်ကလွဲလို့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမည်သည့်ခံစားချက်မှရှိမနေတော့။(ဟုထင်ခဲ့သည်)အရင်လိုလဲရှက်သလိုရွံ့သလိုဖြစ်မနေတော့။သူသည်ကျွန်တော်နှင့်လူမျိုးကွဲဖြစ်သဖြင့်အနည်းငယ်ထူးဆန်းနေသည်မှအပသာမန်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သာဖြစ်၏။တစ်ခါတစ်ရံတော့သူကကျွန်တော်ကျောင်းသို့စက်ဘီးဖြင့်လာကြိုတတ်သည်။ရုပ်ရည်ကထူးထူးခြားခြားပေါ်လွင်နေသောသူ့ကို ကျောင်းရှိမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများကဘယ်သူလဲဟုမေးလာလျင်ဂုဏ်ယူသလိုလေသံဖြင့် 'ငါ့အစ်ကိုကွ' ဟုဖြေတတ် နေပြီ..။အိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်စာကျက်ချိန်လိုသေးပါကတစ်ခါတစ်ရံသူနှင့်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထွက်ထိုင်ဖြစ်တတ်သည်။တကယ်ဆိုအားလုံးထိုအဆင့်မှာရပ်တန့်နေခဲ့မည်ဆိုလျင်အရာရာပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မည်။လောကသဘာဝသူနှင့်ခွဲခွာရသောအချိန်တွင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြူစင်ပေါ့ပါးစွာနူတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အခုတော့ အမှားဆိုသည်မှာပြင်ရန်ခက်မှန်းသိရက်ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်တိုးခဲ့မိပါသည်။ ထိုနေ့ကကျွန်တော်သည် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏မွေးနေ့ပါတီမှအယ်လ်ကိုဟောများသောကော့တေးသောက်လာခဲ့သည်။ဒီကြားထဲကိုယ်ပေါ်သို့အနည်းငယ်မှောက်ကျခဲ့သေးသောကြောင့်ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားများဆီကအနံ့ပြင်းပြင်းထွက်နေပါသည်။
သူခုတင်ဘေးတွင်ထိုင်လျက်အဆင်သင့်တွေ့ရသောအခွေတစ်ခွေကိုစက်ထဲကောက်ထည့်မိစဉ်မှာပဲခေါင်းပေါ်မှရေများကိုမျက်နှာသုတ်ပ၀ါတစ်ထည်ဖြင့်သုတ်လျက်သူဝင်လာခဲ့သည်။ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အံ့သြသယောင်ရှိသွားသော်လဲပုံမှန် မဟုတ်သောကျွန်တော့်အမူအယာကိုချက်ချင်းပင်သဘောပေါက်သွားကာ မူးလာတယ်ပေါ့ဟုပြောသည်။
ကျွန်တော်ကမှုန်ကုတ်ကုတ်ဖြင့်ခေါင်းငြိမ့်ပြလျင်သူကသဘောကျသလိုရယ်၍ကျွန်တော့်မေးဖျားကိုဆွဲညှစ်ပါသည်။ပြီးတော့ခုတင်ပေါ်သို့ခုန်တက်ကာကျွန်တော်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိအောင်ခပ်စောင်းစောင်းလှဲလိုက်ချိန်တွင်သူ့ခန္ခာကိုယ်ပေါ်တွင် ပေါင်လည်သာသာမျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးမှလွဲ၍ဘာအ၀တ်အစားမှရှိမနေမှန်းကျွန်တော်သတိထားမိသွားသည်။ပေါင်ကို တစ်စောင်းထောင်ကာကျွန်တော်ဘက်သို့လှဲနေသောကြောင့်အသာလေးချည်ထားသောမျက်နှာသုတ်ပုဝါသည်ပေါင်ရင်းတွင်ပြေလျော့လုနီးပါးဖြစ်နေသည်။
မီးရောင်အောက်တွင်ရေစို၍လက်နေသောပေါင်တံများ၏ကျစ်လျစ်မှုကိုတီဗွီဖန်သားပြင်သို့အာရုံပြောင်းယူလိုက်ရသည်။သို့သော်လည်းခဏနေတော့သူကကျွန်တော့်ဘေးရှိစားပွဲပေါ်မှသောက်ရေဘူးကိုသူ့ဆီလှမ်းဖို့ပြောချိန်တွင်သူ့ထံသို့အာရုံ ရောက်သွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ရေဘူးကိုယူကာထိုင်ရာမှမထပဲမော့ချလိုက်တော့ဖိတ်တစ်ဝက်စင်တစ်ဝက်ရေများသည်သူ့ခန္ခာကိုယ်တစ်လျှောက်စီးကျလာသည်။မီးအရောင်တွင်ဟပ်နေသောသူ့ဝမ်းဗိုက်ရှိပြေပြစ်သောကြွက်သားများသည်စိုလက်လျက်ရှိသည်။နုတ်ခမ်းများဆီကစီးကျလာသောရေစီးကြောင်းကလေးသည်ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်အိုင်ထွန်းနေပြီးမှ အောက်သို့ဆက်စီးသွားပြန်သည်။ဤသည်ကိုသူလည်းသတိပြုမိသွားလျက်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုဖယ်ရှားလိုက်ချိန်တွင်တော့ကျွန်တော်ထူပူသွားကာပြူတင်းပေါက်ဖက်သို့မျက်နှာလှည့်လိုက်မိသည်။
ကျွန်တော်ကိုအ၀တ်အစားများအားလုံးလဲအပြီးခုတင်ပေါ်တွင်တင်ရန်လာပွေ့ချီသည့်အချိန်တွင်သူ့ကိုမလွတ်တန်းပွေ့ဖက်ထားမိခဲ့သည်။သာမန်အချိန်တွင်ဆိုလျင်သူ့ဗလဖြင့်ကျွန်တော့် ခန္ခာကိုယ်ကိုအသာလေးပွေ့ချီနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုအချိန်ကသူကိုယ်တိုင်မူးနေခဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးခုတင်ပေါ်သို့ပစ်ကျသွားခဲ့ပါသည်။သူမျက်နှာနှင့်အနီးကပ်တွေ့ထိမိ ချိန်တွင်ကျွန်တော်ကိုယ်တစ်ခုလုံးကသူ့အပေါ်တွင်လုံးလုံးလျားလျားတင်လျက်ရှိသောကြောင့်ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုထူမတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမအောင်မြင်ပါ။
သူ့လက်များသည်ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ထားလျက်ရှိ၏။ခဏကြာတော့ကျွန်တော့် ခန္ခာ ကိုယ်ကိုသူ့ပေါ်မှညင်သာစွာဖယ်ချလျက်ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုသူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ပေါ်တင်ပေးခဲ့သည်။ကျွန်တော့်၏ လက်တစ်ဖက်သည်အ၀တ်မဲ့နေသောသူအပေါ်ပိုင်း ခန္ခာကိုယ်ပေါ်တွင်ကန့်လန့်ဖြတ်တင်လျက်ရှိသည်။
မနက်လင်း၍ကျွန်တော်နိုးလာသောအချိန်တွင်သူကျွန်တော့်ဘေးတွင်ရှိမနေတော့ပါ။ ရေချိုးခန်းထဲမှာလား ဒါမှမဟုတ်.......အိုး...ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူး.။
နာရီမှန်ကွဲရှသွားသောဒဏ်ရာသည်အတန်ငယ်များသဖြင့်နာကျင်နေသည်မှန်သော်လည်းရင်ထဲကနာကျင်မှုကိုဖြင့်မကျော်လွှားနိုင်ပါ။သူကအခြေအနေကိုရိပ်စားမိစွာစကားတစ်ခွန်းမှမဆိုပဲအရက်ပျံဖြင့်ဆေးကာပတ်တီးစီးပေးသည်။ဒဏ်ရာကိုအရက်ပျံဖြင့်ဆေးတော့တွန့်ကနဲဖြစ်သွားသော်လည်းမျက်နှာကြောမလျော့သောကျွန်တော့်ကိုသူရယ်ချင်ဟန်ရှိသော်လည်းမ ရယ်ခဲ့ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော့်ရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလျက်ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟုမေးပါသည်။ကျွန်တော်ပြန်မဖြေဖြစ်ပဲအိမ်သို့ထ ပြန်လာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒီလိုပါပဲ။ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲနှင့်ဘာဖြစ်သင့်တာလဲဟူသော အစွန်းနှစ်ဘက်စီမှာ ဘာကိုမှ မဝေ ခွဲတတ်ခဲ့တာ...။ကျွမ်းကျင်သောသူနူတ်ခမ်းများ၏အတွေ့အထိကိုသာယာမိကြောင်းဝန်ခံဖို့ကျွန်တော်မရှက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ နှင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပတ်သက်မှုမျိုးကိုဖော်ဆောင်နေခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ကိုယ်ဘာသာပင်ယုံကြည်လက်ခံရန်ခဲယဉ်းလျက်ရှိနေခဲ့သည်။သူနှင့်တွေ့၍သူ့၏ဇွတ်တရွတ်အပြုအမူများတွင်ကျဆုံးရလေတိုင်းကျွန်တော်၏သိစိတ်ကရုန်းထွက်ငြင်းဆန်ရန်တွန်းအားပေးခဲ့သော်လည်းလက်တွေ့တွင်ဖြစ်မလာခဲ့။ခဏခဏပြောခဲ့သလိုပင်ကျွန်တော်ကိုက တွေဝေ လွန်းလှပါသည်။
ကျွန်တော်အားနည်းသောအင်္ဂလိပ်နှင့်သင်္ချာဖြေသည့်နှစ်ရက်ညနေပိုင်းတွင်ဖြေနိုင်လားဟုဖုန်းဆက်မေးသေးသော်လည်းနောက်ပိုင်းရက်များတွင်လုံးဝဖုန်းမလာတော့ပါ။ထိုရာသီအချိန်သည်မိုးရာသီအကုန်ဆောင်းရာသီလည်းမ၀င်သေးသော ကြောင့်ပူလောင်အိုက်စပ်သောညသန်းကောင်တွင်ကျွန်တော်လန့်နိုးလာခဲ့သည်။နိုးနိုးချင်းမှာအာခေါင်များခြောက်သွေ့လျက်ရေငတ်သလိုဖြစ်နေခဲ့သောကြောင့်ရေထသောက်ရင်းသူအခန်းလေးမီးမှိတ်ထားသည်ကိုသတိထားမိသွားလျင်ရင်ထဲ တွင်လှိုက်ကနဲနာကျင်လာတော့သည်။
ထိုညကဘယ်လိုမှအိပ်မပျော်ခဲ့တော့ပဲသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်တလဲလဲဖွင့်ကာမိုးလင်းခဲ့ရပါသည်။မျက်ရည်မကျခဲ့တာသေချာသော်လည်းလွမ်းဆွတ်တမ်းတရခြင်း၏ပင်ပန်းနာကျင်စရာအရသာကိုတော့ကောင်းကောင်းသိသွားခဲ့၏။သူအသေအချာ ပြန်လာမှာကိုသိလျက်နဲ့ပင်ဤမျှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရသောကျွန်တော်သည်တစ်သက်တာဝေးကွာရမည့်လမ်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်မိခဲ့ပါသလဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးတိုင်းလည်းတိကျသေချာသောအဖြေကိုမရခဲ့ပါ။ထိုစဉ်ကတော့တစ်လပြည့် ပြီးဒုတိယရက်တွင်သူပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။တစ်လပြည့်ပြည့်ချင်းရက်ကသူပြန်ရောက်လောက်ပြီအထင်နှင့်ကျူရှင်မ၀င်ပဲစောပြန်ခဲ့သော်လည်းရောက်မလာသောကြောင့်နောက်တစ်ရက်တွင်တော့မလာလောက်သေးဘူးအထင်နှင့်ကျွန်တော်အိမ် ပြန်နောက်ကျခဲ့သည်။အနည်းငယ်ညနေစောင်းချိန်ကျောင်းမှာလည်းပင်ပန်းခဲ့သောကြောင့်နွမ်းညစ်နေသောစိတ်တို့ သည် မီးလင်းနေသောသူ့အခန်းလေးကိုမြင်သည်နှင့်ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးသွားခဲ့လျင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပင်နားမလည်နိုင်ခဲ့။အိမ်သို့အရင်မ၀င် ဖြစ်သေးပဲသူအိမ်သို့သာပြေးတက်သွားခဲ့သည်။ကျွန်တော်ကိုမြင်စဉ်ကတောက်ပမှုဖြင့်လင်းလက်သွားသောသူ့မျက်လုံးများကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်။
ကန်ဘောင်ပေါ်သို့ရောက်သွားချိန်သည်အနည်းငယ်ညနက်စပြုနေပြီဖြစ်သောကြောင့်လူရှင်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပြီ..။ကျွန်တော်ကကန်လမ်းထိပ်ရှိလှေကားကျယ်ကြီးမှတက်လာခဲ့သောကြောင့်ရေစက်ဘေးရှိသူနှင့်ကျွန်တော်အမြဲထိုင်နေကျခုံတန်းလေးသည်ထိုင်သူမဲ့နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။အရင်လိုလုထိုင်စရာမလိုတော့သည့်တိုင်ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်သွားကာထိုင်ချလိုက်မိသည်။ထောင့်တစ်ဖက်စွန်းတွင်ထိုင်လိုက်သောကြောင့်လက်တစ်ဖက်ကိုထိုင်ခုံလက်တန်းပေါ်သို့တင်ထားလိုက်ရ သည်။အရင်လိုမှီတွယ်စရာရင်ခွင်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဘေးတွင်ရှိမနေပါ။တစ်ခါကကျွန်တော်နှင့်သူဒီခုံပေါ်မှာထိုင်နေရင်းကျွန်တော့်လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားချင်သောသူနှင့်စကားများခဲ့ဖူးသည်။အခုတော့ဆုပ်ကိုင်မည့်သူမရှိတော့သောကျွန်တော် လက်တစ်ဖက်သည်ထိုင်ခုံလက်တန်းပေါ်တွင်မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာလှဲလျောင်းလျက်ရှိသည်။မိုးကရုတ်တရက်သည်းလာပြန်သည်။သူသာရှိမည်ဆိုလျင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြရအောင်ဟုပြောမှာသေချာသလောက်ရှိသည်။အနည်းငယ်အအေးခံရုံဖြင့်ဖျားတတ်သောကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထက်ပင်သူကစိုးရိမ်တတ်ပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့သူ့ကိုစချင်သောကြောင့်ပေကတ်ခါထိုင်နေလိုက်သည်။ထိုအခါမျိုးတွင်သူကအိမ်ပြန်ရန်အမျိုးမျိုးချော့မော့ဆွဲဆောင်တတ်သည်။သူထပ်တလဲလဲသုံးတတ်သည့်နည်းကတော့ကျွန်တော်သိပ်ကြိုက်သည့်သူ့လက်ရာsaladလုပ်ပေးမည်ဟူသောနည်းပါပဲ။ချက်ချင်းပင်သူစိုးရိမ်တကြီးပြန်ဖို့အခေါ်ကိုညစ်ကျယ်ကျယ်ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသောဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးသာသာကောင်လေးဘ၀ကိုတမ်းတမိသွားပြန်သည်။သူပေးခဲ့သောပျော်စရာကာလတွေသူမရှိတော့သည့်အခါလွမ်းဆွတ်နာကျင်စရာများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ဘယ်တွေးမိခဲ့ပါ့မလဲ။
မိုးစက်များအနည်းငယ်ကျဲပါးသွားတော့ကန်ရေပြင်သည်တည်ငြိမ်သလောက်ဖြစ်လာပြန်၏။အနက်ရောင်ကန်ရေပြင်တွင်သူ့မျက်နှာလေးကိုပြန်လည်ပုံဖော်ကြည့်မိရင်းနူတ်ဖျားမှတစ်စုံတစ်ရာကိုရွေရွတ်မိချိန်တွင်ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်တစ်ဆစ်ဆစ် နာကျင်လာခဲ့ပြန်သည်။သူကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ဘာသာစကားတွင်ချစ်တယ်ဟုပြောသောအသံထွက်ကလေးဖြင့်နာမ်စားသုံးခေါ်ဝေါ်တတ်သည်။သူမရှိတော့သည်နောက်ပိုင်းကာလရှည်ကြီးထဲမှာ ဒီနာမည်ကလေးနဲ့ပြန်ထူးခွင့်မရှိတော့တာ ကာလမည်မျှကြာခဲ့ပြီလဲ..ဗျာ။
တစ်ယောက်တည်းအေးစက်နေသည့်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုသောက်ရချိန်တိုင်းတွင်ကျွန်တော်အတွက်ကော်ဖီဖျော်ပေးခဲ့သောမွေးညင်းစိမ်းလေးများယှက်သန်းနေသောတစ်ချိန်ကလက်ကလေးတစ်စုံကိုမြင်ယောင်မိပါသည်။ကျွန်တော်ကမှန်ပြူတင်းပေါက်မှမြင်ရသောအပြင်ဘက်မြင်ကွင်းများကိုငေးနေခဲ့သည်။သာယာကြည်လင်သောနွေနံနက်ခင်းတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်ပြီးလျင်အောင်စာရင်းထွက်မည်ကိုကြိုစိတ်ဆင်းရဲနေသောကျွန်တော်ကိုသူရယ်မောခဲ့သည်။ကျွန်တော်ကစိတ်ကောင်းလဲမရှိဘူးဟုတီးတိုးရေရွတ်မိတော့သဘောကျသလိုပြုံးလျက်ကျွန်တော့်ပါးကိုဆွဲလိမ်ရန်ကြိုးစားလျင်သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုပုတ်ချပစ်ခဲ့သည်။လမ်းသွားရင်းတစ်စုံတစ်ရာနှင့်တိုက်ခိုက်မိသည့်အခါသို့မဟုတ်မနက်စောစောပေါင်မုန့်မီးကင်ရာတွင်အဆင်မပြေသည့်အခါစသည့်အသေးအဖွဲများကိုပင်စိတ်ဆတ်ဒေါသထွက်လွယ်သောသူသည်ကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်လျင်တော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပင်စိတ်ရှည်၏။သို့သော်လည်းသူနှင့်ကျွန်တော်ပဍိပက္ခ ဖြစ်ရသည့်အချိန်ကနည်းလျက် အရာအတော်များများတွင်အကြိုက်ချင်းတူပါသည်။
ရုပ်ရှင်ကြိုက်တာ သီချင်းဖွင့်ပြီးအိပ်တတ်တာ မိုးရာသီကိုနှစ်သက်တာစသဖြင့်ပြော ရမည်ဆိုလျင်ဆုံးလိမ့်မည်မထင်ပါ။ ကျွန်တော်ကြိုက်သောအရာများကိုသူအမြဲလိုက်ကြိုက်ရန်ကြိုးစားတတ်သော်လည်းကြက်သွန်ဖြူနံ့ကိုတော့အလွန်မုန်း သည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ကြက်သွန်ဖြူကိုအကြိုက်ကြီးမဟုတ်သော်လည်းမကြာခဏစားပြီးသူ့ကိုသွားနမ်းတတ် သည်။ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကတော့သူအိမ်မှပြန်သွားပြီးထမင်းစားပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာသောကျွန်တော့်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဟုမေးခဲ့သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့သူသည်ကျွန်တော်ကိုစက်ဘီးပေါ်တွင်တင်လျက်ကျွန်တော်သွားချင်သည့်နေရာများသို့လိုက်ပို့တတ်သည်။ကျွန်တော်ကစက်ဘီးစီးသင်ချင်သည်ဟုဆို၍ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့လမ်းမသည်လူရှုပ်သောကြောင့် RC-2 ၀င်းထဲသို့ သွားသင်ပေးခဲ့သည်။အနောက်မှသူထိန်းပေးနေစဉ်ကအဆင်ပြေခဲ့သော်လည်းကျွန်တော်တစ်ယောက် တည်းတင်လွှတ် လိုက်သည်နှင့်ပုံပျက်ပန်းပျက်ပစ်လဲခဲ့ပါသည်။
ဤမျှအသေးစိတ်ကြင်နာတတ်သောသူ့ကိုကျွန်တော်အချိန်များစွာသတိရနေခဲ့ခြင်းသည်ကျွန်တော့်အပြစ်မှမဟုတ်ပဲ။အစစအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့လျက်ရှိသောရှိသောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘ၀ထဲသို့တစ်သက်စာဝေးကွာစေဖို့ပြသနာဝင် ရောက်လာခဲ့ပုံသည်သိမ်မွေ့လွန်းလှ၏။ကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ရက်တွင်သူမပါပဲသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်သို့သွားလည်ရာမှစပါသည်။ထိုနေ့ကကျွန်တော်နှင့်ထိုသူငယ်ချင်းသည်ရုပ်ရှင်တစ်ကား(Philadelphiaထင်သည်)အတူထိုင်ကြည့်နေရာကယောကျာင်္းနှစ်ယောက်ပွေ့ဖက်ချစ်ကြိုက်ခန်းပါလာသောအခါ စောက်ရမ်းရွံဖို့ကောင်းတယ် ဟုရွေရွတ်ကာထ ပိတ်ပစ် ခဲ့သည်။ကျွန်တော်ကိုမရည်ရွယ်မှန်းသိသော်လည်းရင်ထဲတွင်အောင့်ကနဲဖြစ်သွားသည်အထိနာကျင်သွားခဲ့ပါသည်။ဘုရားဘုရား ကျွန်တော်နှင့်သူ့အကြောင်းကိုများသိ သွားပါကဒီကောင်ဘာပြောမှာပါလိမ့်။ ထိုနောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကို နူတ် ဆက်ပြီးချက်ချင်းထပြန်လာမိသည်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့လည်းထိုစကားသည်သာနားထဲတွင်အထပ်ထပ်ကြားယောက်လျက်သူ့ဆီကိုသွားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါသည်။
ပြီးတော့မနေ့ကတစ်နေ့လုံးမတွေ့ရဘူးနော်ဟုကျွန်တော်မျက်လုံးများထဲသို့စိုက်ကြည့်ကာပြောသည်။တစ်စုံတစ်ရာမတုံ့ပြန်မိ သူ့ကိုလဲပြန်လည်မပွေ့ဖက်မိပေမယ့်သူ့အကြည့်များကြောင့်ရင်ထဲတွင်နွမ်းနယ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပင်သူ့နိုင်ငံသို့ရုတ်တရက်ပြန်စရာအကြောင်းပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကံတရားအလှည့်အပြောင်းသည်အလွန်မြန်ဆန်လှသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခွင့်နည်းနည်းမှမရခဲ့။
'ကိုယ်ပြန်ရတော့မယ်' အနည်းငယ်အဖျားခတ်တုန်ရင်ချင်နေသောသူ့အသံလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားယောင် နေခဲ့ပါသည်။ရင်ထဲတွင်ရုတ်တရက်နာကျင်လာသော်လည်းမကြာခင်မေ့ပျောက်သွားမှာပါဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်လည်လျက်ဘာမှမခံစားရသလိုဆက်နေခဲ့သည်။သူနှင့်လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်သောအခါကျွန်တော်ငြင်းခဲ့သည်။ 'ဟင့်အင်း' ရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင် တော့တဲ့ဇာတ်ကိုဒီမှာတင်ရပ်ကြမယ်။အချိန်တွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဝေးကွာခြင်းမှာအသားကျသွားမှာပါ။
ရင်ထဲတွင်ဘာမှမခံစားရသလိုဟန်ဆောင်လျက်စကားတွေအများကြီးပြောနေခဲ့သော်လည်းသူ့မျက်ဝန်းများဆီမှကြေကွဲရိပ်တို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်တော့မည်မထင်ပါ။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော့်မေးဖျားကိုဆွဲယူမော့စေကာကျွန်တော် မျက်ဝန်းများဆီသို့စိုက်ကြည့်လျက် ကိုယ့်ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ဟုမှာခဲ့သည်။
ခံစားခဲ့ရတာကတော့ထပ်တူထပ်မျှပါပဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်လျက်ရှိ၏။ ဤအကြောင်းကိုပြန်တွေးမိတိုင်း မနေ့တနေ့ ကလိုနာကျင်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်လာသောခြေလှမ်းတိုင်းသည်လည်းကောင်း တက်လာသောလှေကားထစ်တိုင်းသည်လည်းကောင်း နောက်ဆုံး သော့ကိုလှည့်ဖွင့်နေသည့်အချိန်သည်လည်းကောင်းကျွန်တော်အတွက်အဓိပ္ပါယ်မဲ့လျက်ရှိ၏။တံခါးကိုဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်ချိန်တွင်လည်းချိုသာသောအနမ်းတစ်စုံဖြင့်ကျွန်တော့်ကိုကြိုဆိုမည့်သူမရှိပါ။နံရံကပ်မီးခလုတ်ကိုနှိပ်ချလိုက်ပြီးမှကျွန်တော့် လက်များရေစိုနေသည်ကိုရုတ်တရက်သတိရသွားသည်။
ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အလွမ်းတွေကလွဲဘယ်အရာမှအသစ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုပင်။ခြေရင်းပြူတင်းပေါက်ကိုမဖွင့်မိအောင်သတိထားလျက်ဝရန်တာဆီသို့လျှောက်သွားလိုက်သည်။မိုးပေါ်ကိုမော့ကြည့်မိတော့မိုးသားများအတန်ငယ်လွင့်ပါးလျက်ပြိုးပြောက်သောကြယ်ကလေးများကိုပင်ဟိုတစ်ပွင့်ဒီတစ်စမြင်နေရပြီ။ဤကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုထဲ၏အောက်တွင်သူနှင့်ကျွန်တော်အတူရှိနေသေးကြောင်းတွေးမိသွားသောအခါရင်ထဲတွင်နွေးထွေးသွားပါသည်။ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့တစ်နေရာခင်ဗျားရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့မနက်ဖြန်တွေကိုကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တာ။သတိတရတမ်းတနေခဲ့သည်ဖြစ်စေအမှတ်တမဲ့မေ့လျော့ထားခဲ့သည်ဖြစ်စေပေါ့။ တွေ့ခွင့်တွေဘယ်လိုမကြုံပေမယ့် ဆုံနိုင်ခွင့်တွေဘယ်လိုဝေးပေမယ့် ဒီအသိလေးတစ်ခုနဲ့ တစ်ယောက်တည်း နေတတ် အောင်ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။
စာကြွင်း။ ။ ဟိုးအရင် ကျွန်တော်စာတွေမရေးခင်တုန်းက အင်တာနက်စသုံးကာစက ခင်မင်ခဲ့သော ဖတ်ခဲ့ရသော ညီလေး ဝေဟန်ပိုင်ရဲ့စာမူတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလတွေတုန်းက တော်တော်လေးလှုပ်ခတ်သွားရသော စာမူတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါ တယ်။ သူရေခဲ့သော မူရင်းစာမူအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်စွက်ထားခဲ့တယ်လို့ အခုချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစားမိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖတ်ရတာအဆင်မပြေရင် ကျွန်တော့်တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။အခုတလော ကျွန်တော် စာတွေ မရေးဖြစ်တော့ တခြားသူများရေးသည့်အထဲက ဖတ်လို့ကောင်းတာ သင့်တော်တာလေးတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Sitt Mhan said...
ငိုတောင် ငိုရတယ်ဗျာ ...............
အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးပါဘဲ.....ဒါတကယ့်အဖြစ်အပျက်လား၊စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးထားတာလား...ဒီလိုမျိုး Romantic ဆန်တဲ့ Love Story လေးတွေများများတင်ပေးပါနော်....